Oriọna UV ( 28 )
N'èzí UFO 15W Solar LED Garden Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ọkụ ọkụ 60W UV maka ụlọ na-egbu H1N1 na COVID-19  Kpọtụrụ ugbu a
Mgbanye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 36W UV maka ụlọ na-egbu H1N1 na COVID-19  Kpọtụrụ ugbu a
Aka 4W UV aka wand  Kpọtụrụ ugbu a
3.8W ụgbọ ala sterilaiz  Kpọtụrụ ugbu a
5W obere sterịwa UV  Kpọtụrụ ugbu a
35W UV sterilizer ọgwụ ịgba ọgwụ nje  Kpọtụrụ ugbu a
150W UV ọkụ maka ọgbụgba ọgwụ n'ụlọ ọgwụ  Kpọtụrụ ugbu a
oriọna nje na-egbu ogwu nke 38m gburu H1N1  Kpọtụrụ ugbu a
3W Igwe ọkụ UVC Disinfection nke nwere aka  Kpọtụrụ ugbu a
1000W ụlọ ọgwụ UV sterịn  Kpọtụrụ ugbu a
1.5W Igwe ọkụ UVC LED Disinfection  Kpọtụrụ ugbu a
10W njikwa UV Disinfection nke aka  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ọkụ Disinfection USB nke 3W USB  Kpọtụrụ ugbu a
2W UVC ihicha ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
5W UVC disinfection Light  Kpọtụrụ ugbu a
50W UV sanitizer ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
38W UV ọgbụgba ọgwụ quartz oriọna egbu egbu Nje Virus  Kpọtụrụ ugbu a
38W UV disinfection quartz lamp Gburu H1N1  Kpọtụrụ ugbu a
38W UV disinfection quartz lamp Kpee COVID-19  Kpọtụrụ ugbu a
N'èzí UFO 15W Solar LED Garden Light
Ọnụahịa otu: USD 29.77 / Piece/Pieces
N'èzí UFO 15W Solar LED Garden Light Enweghị ego ọkụ eletrik chọrọ ma yabụ ụgwọ akwụghị ụgwọ, ọ nweghị wires tigled na zero na-etinye ọnụ n'okwu. Ikanam anyanwụ ìhè bulbs achọ a nnọọ ala ume larịị ma na-enye a ogologo lifespan, na-eme ha kacha ala mmezi n'èzí ọkụ nhọrọ Akwụkwọ...
Ihe ọkụ ọkụ 60W UV maka ụlọ na-egbu H1N1 na COVID-19
Ọnụahịa otu: USD 24 - 25.91 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: CTN SIZE: 653 × 438 × 610mm, 6pcs / ctn, GW: 10.1KG
Inye Ike: 50000 pcs / Month
RYGH bụ 60W UV Disinfection Light Germicidal lamp lampighter . Anyị na-enye ngwaahịa mkpuchi ọkụ Germicidal kacha mma na ọnụahịa dị ọnụ ala. Igwe oriọna UV siri ike , nguzogide okpukpu abụọ, teknụzụ mkpuchi nano, oge nwere ike igbochi radiesinke Ìhè na-egbu nje na-enweghị ọgwụ. Uru nke disinfection UV. igbu nje nke...
Mgbanye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 36W UV maka ụlọ na-egbu H1N1 na COVID-19
Ọnụahịa otu: USD 20.57 - 22.49 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: CTN SIZE: 653 × 438 × 476mm, 6pcs / ctn, GW: 8.1KG
RYGH bụ 36W UV Disinfection Light Germicidal lamp lampighter . Anyị na-enye ngwaahịa mkpuchi ọkụ Germicidal kacha mma na ọnụahịa dị ọnụ ala. Igwe oriọna UV siri ike , nguzogide okpukpu abụọ, teknụzụ mkpuchi nano, oge nwere ike igbochi radiesinke Ìhè na-egbu nje na-enweghị ọgwụ. Uru nke disinfection UV. igbu nje nke...
Aka 4W UV aka wand
Ọnụahịa otu: USD 14.04 - 18.94 / Piece/Pieces
RYGH bụ onye na-arụ ọrụ sterịnzer anọ na-ejigide UV wand sterilizer . Anyị na-enye kacha mma 4W Portable Handwado UV wand sterilizer n'ọnụ ọnụ ọnụ. Superwado 4W Portable Handwado UV wand sterilizer , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Uru nke 4W...
3.8W ụgbọ ala sterilaiz
Ọnụahịa otu: USD 10.71 - 9.82 / Piece/Pieces
RYGH bụ onye na-emepụta sterịzer UV . Anyị na-enye kacha mma sterịzer UV sterịnzer na ọnụ ala. Nnukwu ụgbọ ala UV steriiti , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Uru nke sterịnzer UV ụgbọ ala: igbu nke nje, nje, dị ka H1N1 na COVID 19, na kwaa n'ime...
5W obere sterịwa UV
Ọnụahịa otu: USD 6.39 - 7.43 / Piece/Pieces
RYGH bụ onye na- emepụta ọkụ ọkụ UVC Disinfection light . Anyị na-enye ọkụ ọkụ ntụgharị diski zuru ike 5W Portable UVC na ọnụahịa dị ọnụ ala. Igwe ọkụ Disinfection UVW 3D nke dị ike , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Uru nke 5W Igwe UVC Disinfection...
35W UV sterilizer ọgwụ ịgba ọgwụ nje
Ọnụahịa otu: USD 24.99 - 33.15 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Nna-ukwu / ctn: 60x60x38cm = 0.137CMB 14KG
Eziokwu ndị a gbasara UV ọkụ ga - enyere gị aka inwe ahụ iru ala karịa iji UV ọnya ọkụ : - Nnyocha egosila na oke kachasị maka adọta ụmụ ahụhụ na-efe efe dị ihe dị ka 253.7nm, 345 ruo 370nm ma nke a bụ efegharị nke akpa nke UVA na-enye na ndị na-efe efe. Uru nke disinfection UV. igbu nje nke nje, nje, dị ka H1N1 na...
150W UV ọkụ maka ọgbụgba ọgwụ n'ụlọ ọgwụ
Ọnụahịa otu: USD 84.62 - 90.22 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: CTN
Inye Ike: 5000 pcs / Month
UV ìhè ọgwụ disinfection na enyemaka sterilaiz ụlọọgwụ na na-na ikuku dị ọcha maka ọrịa. A na-ejikwa ọkụ UV na-egbochi gburugburu mmepụta nri. N'ụlọ, ọkụ ọkụ Ultraviolet na-enyere ndị na-amata nkọ nza aka. Uru nke disinfection UV. igbu nje nke nje, nje, dị ka H1N1 na COVID 19, na-ebekwa n’ime sekọnd . mmiri adịghị...
oriọna nje na-egbu ogwu nke 38m gburu H1N1
Ọnụahịa otu: USD 119 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 520x490x510mm, 4 PC / ctn, GW: 8.2KG
RYGH bụ 38W UV Disinfection Light Germicidal lamp lampighter . Anyị na-enye ngwaahịa mkpuchi ọkụ Germicidal kacha mma na ọnụahịa dị ọnụ ala. Igwe oriọna UV siri ike , nguzogide okpukpu abụọ, teknụzụ mkpuchi nano, oge nwere ike igbochi radiesinke Ìhè na-egbu nje na-enweghị ọgwụ. Uru nke disinfection UV. igbu nje nke...
Eziokwu ndị a gbasara UV ọkụ ga - enyere gị aka inwe ahụ iru ala karịa iji UV ọnyà ọkụ : - Nnyocha egosila na oke kachasị maka ịdọta ụmụ ahụhụ na-efe efe dị ihe dị ka 345 ruo 370nm ma nke a bụ mbufe nke akpa nke UVA na-enye maka ndị na-efe efe. Uru nke disinfection UV. igbu nje nke nje, nje, dị ka H1N1 na COVID 19,...
3W Igwe ọkụ UVC Disinfection nke nwere aka
Ọnụahịa otu: USD 12.71 - 26.8 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Ọnụ ọgụgụ: mbukota 50, nchikota: 52.5 * 40.5 * 31.5cm
RYGH bụ onye na-emepụta ọkụ ọkụ ọkụ 3C UVC LED Disinfection light . Anyị na-enye ọkụ elele 3W PortC UVC LED Disinfection nke kachasị mma na ọnụ ọnụ ala. Igwe ọkụ Disinfection UVW 3D nke dị ike , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Uru nke 3W Igwe ọkụ UVC...
1000W ụlọ ọgwụ UV sterịn
Ọnụahịa otu: USD 906 - 910 / Piece/Pieces
1000W UV Disinfection Light Ngwaọrụ maka ọgwụ disinfection na enyemaka sterilaiz ụlọọgwụ na na-na ikuku dị ọcha maka ọrịa. A na-ejikwa 1000W UV Disinfection Light Ngwaọrụ iji dochie gburugburu mmepụta nri. N'ụlọ, ọkụ ọkụ Ultraviolet na-enyere ndị na-amata nkọ nza aka. Uru nke 1000W UV Disinfection Light Device ....
1.5W Igwe ọkụ UVC LED Disinfection
Ọnụahịa otu: USD 14.23 - 16.27 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Ogo CTN: 37 * 36 * 34cm CTN, olu: 0.032cbm, Ibu ibu nke CTN: 13.5 kgs, 100 PCS / CTN
RYGH bụ onye nrụpụta ọkụ ọkụ UVC LED Disinfection light . Anyị na-enye mma kachasị mma 1.5W UVC LED Disinfection light na ọnụahịa dị ọnụ ala. Super ike1.5W Port UVC LED Disinfection light , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Uru nke 1.5W Igwe ọkụ UVC...
10W njikwa UV Disinfection nke aka
Ọnụahịa otu: USD 10.61 - 9.64 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Ogo CTN: 51.5 * 41 * 44cm, PC / ctn: 100pcs / CTN, GW: 22kg
RYGH bụ onye 10W na-emepụta UV Disinfection light steel . Anyị na-enye ezigbo mma 10W Handin UV Disinfection light n'ọnụ ọnụ ọnụ. Superwarụ ọkụ ọkụ 10W ejiri aka UV , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Abamuru nke 10W UV Disinfection ọkụ ejiri aka ....
Igwe ọkụ Disinfection USB nke 3W USB
Ọnụahịa otu: USD 10.22 - 12.54 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Ibu ibu: gburugburu 160g PC / ctn: 100 pcs / ctn gburugburu 17K
RYGH bụ onye na-emepụta 3W USB UVC Disinfection light . Anyị na-enye ọkụ kacha mma 3W USB UVC Disinfection light n'ọnụ ọnụ ọnụ. Super ike 3W USB UVC Disinfection ọkụ , igba ogwu abuo, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-ejighi kemịkal. Uru nke 3W USB UVC Disinfection light . igbu nje...
2W UVC ihicha ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 15.04 - 16.97 / Piece/Pieces
RYGH bụ 2W handheld UV sterilizer emeputa. Anyị na-eweta ngwaahịa kacha mma na- enwu ọkụ nke igwe ọkụ ọkụ 2W na-agbanye aka na ọnụ ahịa ọnụ ala. Ọmarịcha ọkụ ọkụ ọkụ 2W UVC sterilizer , okpukpu abụọ, teknụzụ mkpuchi nano, oge iji gbochie radieshon Ìhè na-egbu nje na-enweghị ọgwụ. Uru nke 2W UVC sterilizer light . igbu...
5W UVC disinfection Light
Ọnụahịa otu: USD 17.94 - 20.83 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: pcs / ctn: 100 pc CTN nha: 570 * 360 * 240mm GW: 12.5kg
RYGH bụ onye na-emepụta 5 sterịnzer UV sterilizer . Anyị na-enye ngwaahịa kachasị mma 5W ejiri aka nweta ìhè ọkụ UV na ọnụ ahịa ọnụ ala. Ọkụ dị ike 5W UVC sterilizer , okpukpu abụọ, teknụzụ mkpuchi nano, oge nwere ike igbochi radiesinke Ìhè na-egbu nje na-enweghị kemịkal. Uru nke 5W UVC sterilizer light . igbu nje nke...
50W UV sanitizer ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 15.37 - 25.71 / Piece/Pieces
Nke a bụ uru isii kachasị na iji UV Sanitizer Lamp . Uru # 1: UV Sanitizer Oriọna bụ anaghị egbu egbu. N’agha, uru kachasị mkpa nke UV Sanitizer Lamp bụ na ọ bụghị ọgwụ na-egbu egbu. N’adịghị ka kemịkal ndị siri ike nke a na-eji mgbe ụfọdụ na ngwaahịa nhicha ma na-eme ka mmiri dị ọcha, UV Sanitizer Lamp nwere omume...
38W UV ọgbụgba ọgwụ quartz oriọna egbu egbu Nje Virus
Ọnụahịa otu: USD 15.47 - 25.77 / Piece/Pieces
Nke a bụ uru isii kachasị mkpa nke iji ọkụ UV maka ịchapu ọrịa . Uru # 1: UV Light Disinfection bụ ọgwụ anaghị egbu egbu. N’agha, uru kacha mkpa UV na-ekesa bụ na ọ bụghị ọgwụ na-egbu egbu. N'adịghị ka kemịkal ndị siri ike nke a na-eji mgbe ụfọdụ na ngwaahịa nhicha ma na-eme ka mmiri dị ọcha, ìhè UV dị mma...
38W UV disinfection quartz lamp Gburu H1N1
Ọnụahịa otu: USD 13.41 - 23.71 / Piece/Pieces
Teknụzụ ọkụ UV -CLEAN bụ nke na-abụghị kemịkal nke ikuku . UV -CLEAN eji UV -c ìhè ibibi microorganisms, gụnyere bacteria, virus, protist, na ero / ebu. Mgbasa ikuku na-alụ ọgụ na-awakpo DNA / RNA nke sel, na-eme ka ọ ghara inwe ike ịmụgharị ma ọ bụ gbasaa. Uru nke 38W Uv Disinfection Quartz Lamp . igbu nje nke nje,...
38W UV disinfection quartz lamp Kpee COVID-19
Ọnụahịa otu: USD 13.61 - 23.91 / Piece/Pieces
Gosiri wepu Viruses Egwuregwu na-agbanwe, Nje Virus na-egbu UV Light . Igwe ọkụ oriọna na - ejikwa ikuku ga - ejikwa ọkụ UVC dị ọkụ wee gbuo ihe ruru 99% nke nje na nje, gụnyere ọnya Coronavirus (COVID-19). Uru nke 38W Uv Disinfection Quartz Lamp . igbu nje nke nje, nje, dị ka H1N1 na COVID 19, na-ebekwa n’ime sekọnd...
Ibe ọkụ Tube ọkụ Ìhè Ìhè nke Ọkụ Light Light Bay Bay IKỌỌỌRỌ ỌW StreetR LED StreetBỌ Ìhè Ọdọ Ọkụ Ido Ukwuu LED Ike ọkụ ọkụ Inye ọkụ ọkụ